Sangano reHeal Zimbabwe Trust Rotyira Mhirizhonga Kubva muKushaikwa kweMari kuMabhanga
Vanhu vakamira mumitsetse vachida kutora mari dzavo kubva kune rimwe bhanga muHarare. May 5, 2016.
Sangano reHeal Zimbabwe Trust raburtsa gwaro reongororo rinoti dambudziko remari rakatarisana nenyika pari zvino rinogona kukonzera kumwe kuratidzira munyika kana hurumende isina kugadzirisa matambudziko aya.
Mukuru wesangano iri VaRashid Mahiya vanoti vanhu havachatya kutaura pamusoro pedambudziko remari iri, izvo vanofunga kuti chiratidzo chekuti vanhu vafinhwa nazvo.
VaMahiya vanoti sangano ravo rakaita ongororo yemamiriro akaita zvinhu mumabhanga nemusi weChipiri svondo rino rakaona kuti mabhanga mazhinji ari kukundikana kana kupa madhora makumi mashanu acho anonzi akanga ave kuwanikwa kumabhanga.
"Ma queue atakafamba eku POSB, FDC, CABS, ZB neCBZ, Barclays, mazhinji atakafamba musi wa 4 October, taiona kuti vanhu vazhinji vakange vacvhinyunyuta. Uye taiona kuti vanhu vazhinji vaivepo vakanga vachinyunyuta, uye kekutanga vakanga vachinyunyuta pachena pasina zviya zvekungogunun'na," vanodaro Vamahiya.
Vanoti vanhu vaitotaura pachena kuti vanoda mari dzavo, izvo vanoti zvakavaratidza kuti kana zvinhu zvakasagadziriswa zvaizokonzera kuti vanhu varatidzire zvakare sezvo vagara vachiratidzira vachinyunyutawo nezvimwe.
Vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho zvinhu zvisati zvavedzera kuita manyama amire nerongo.
Vanhu vakwanda pamwe nemapato anopikisa munyika vari kuratidzira vachinyunyuta nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika, zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi.
Hurukuro naVaRashid Mahiya